TPLF Oo Sheegtay In Ay La Wareegeen Magaalada Korem
MAK’ELLE(Wararka Maanta)- Jabhadda TPLF ayaa sheegtay ay la wareegeen magaalooyinka Korem sidoo kalena ay ku sii siqayaan magaalada Alamta ee koofurta gobolka Tigray.
Ciidamada TPLF ayaa 28-kii June qabsaday magaalada Mekelle ee caasimadda Tigray. Hase yeeshee qeybo ka mid ah galbeedka iyo koofurta gobolka waxaa haysta ciidamada maamulka deriska la ah ee Amxaarada.
Afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa Reuters u sheegay in ciidamada Tigray ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Korem, oo 170 kmdhanka koonfur kaga beegan Mekelle, ayna kusii siqayaan magaalada weyn ee Alamata oo 20 km koonfur kasii xigta.
Afhayeenka ra’iisul wasaare Abiy Ahmed, iyo madaxa howlgalka dowladda ee Tigray ayaa labaduba ka gaabsaday in ka hadlaan arrinta la xariirta sheegashada TPLF.
Afhayeenka TPLF Getachew ayaa sheegay in kooxdiisa ay dooneyso in xuduudihii dagaalka kahor lasoo celiyo, islamarkaana gargaarka bani aadannimo loo furo dhabbaha.
Tirada dhimashada iyo dhaca oo kusii baahaya Koonfur Afrika – Radio…
Tigrayga oo sheegay inay qabsadeen magaalo kale – Wararka Maanta:…
Wararka Maanta : Sawirro: Mareykanka oo gaadiid dagaal ku wareejiyay DF
Wararka Somali20 mins ago